Renin'Andriamanitra – 2trondro
Home / Fiangonana / Mary / Renin'Andriamanitra
Nahoana no Katolika hoe Maria Renin'Andriamanitra?
Satria izany anaram-boninahitra ho an'ny Mary mamintina ny finoantsika fa i Jesoa no tena Andriamanitra sady tena olombelona tokoa!Ny voalohany fifandirana noho ny fampiasana ny anaram-boninahitra, raha ny tena izy, miverina any am-piandohan'ny taonjato fahadimy, mifantoka amin'ny fanontaniana momba ny maha-Andriamanitra an'i Kristy: Nisy ny zaza naterak'i Maria marina tokoa Andriamanitra, na nataony fotsiny Andriamanitra “hitoetra” ao amin'ny vatan'olombelona? Ny adihevitra dia nandrehitra ny Nestorius, ny evekan'i Constantinople, izay, ny anaram-boninahitra tsy mety Maria Renin'Andriamanitra (Grika Theotokos), nisafidy ny hiantso azy fotsiny fa ny Renin'i Kristy (Christotokos), satria nanaiky ny zaza teraka tany Betlehema tsy ara-drariny hatao hoe Andriamanitra.
Ny eveka ao amin'ny Filan-kevitra Efesosy, nantsoina mba handaminana ilay adihevitra amin'ny 431, niampanga Nestorius’ fampianarana sy mamarana nanambara, Kristianina efa nino foana, fa i Jesosy no tena Andriamanitra tokoa sady tena olombelona sy. ny Filan-kevitra, koa, fomba ofisialy ny anaram-boninahitra sazy Maria Renin'Andriamanitra, Fa izao lohateny Niaro ny zavatra ninoany ny Kristianina momba an'i Jesosy. Fa efa reny iray hita fa tena olombelona izy. Fa Maria zaza Andriamanitra nizaha toetra tena Andriamanitra izy. mazava, misy afaka milaza fa i Jesosy no Andriamanitra satria; ary i Maria no reniny; Mary, noho izany, dia ny Renin'Andriamanitra.
Nirehitra indray ilay adihevitra io nandritra ny Protestanta Fikomiana tao amin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, ary mitohy amin'izao fotoana izao. Zava-manahirana, hoe ny kely indrindra, fa feno taonarivo-ary-a-tapany hatramin'ny faharesen'ny Nestorianism ny anaram-boninahitra Renin'Andriamanitra no maharitra loharanom-adihevitra ny Kristianina. Rehefa mandre Katolika ny Protestanta hoe Maria, renin'i Andriamanitra izy ireo mihevitra isika Hoatran'ny taminy andraikitra ambony loatra, manandratra azy izany, satria toa indrindra ho an'Andriamanitra. Katolika dia tsy hoe Maria Renin'Andriamanitra 'Andriamanitra izy, satria mino isika fa ambony toerana noho Andriamanitra, na izany aza, fa, tena tsotra, satria isika mino ny olona izay naterany tao an-kibony dia Andriamanitra. Ny famantarana iray ihany, Very hevitra ny Katolika ny Protestanta’ fandavana ny miantso Maria, renin'i Andriamanitra, andro rehetra nitoeran'i manambara ny maha-Andriamanitra ny Zanany.
Ny filazana fa i Maria ihany ny renin'i Jesosy’ dia nivadi-pinoana maha-olombelona. Fa, toy ny Katolika no marina mpiaro nanamarika, Mary nitera-olona, tsy natiora (cf. Karl Keating, Fivavahana Katolika sy Fundamentalism, Ignatius Press, 1988, t. 277). Satria ny Andriamanitra fiterahana Maria, sy ny Fiangonana momba ny zavatra inoany ofisialy, amin'ny farany mampianatra antsika momba an'i Jesosy, ny fandavana ny marina momba azy foana ny sasany mitondra any amin'ny fandavana ny Azy.
Ny tena loza eo amin'ny fandavana avy amin'Andriamanitra Maria fiterahana dia izy mitaona be loatra ny hafa, na Kristy mizara roa ny fomba aman-toetra, mizara tsara Azy ho olona roa: ny Andriamanitra sy ny olombelona i Jesosy Jesoa. More na latsaka, izao no nataon'i Nestorius, niaiky ampahibemaso indray mandeha izy no sarotra miantso an'i Jesosy zaza Andriamanitra. amin'ny farany, Nestorianism nandrahona finoana ny Fanavotana. Fa raha toy izany fanavahana azo voasariky ny maha-Andriamanitra eo amin'i Kristy sy ny olombelona, Avy eo dia azo lazaina–dia tsy maintsy lazaina–fa raha ny marina dia tsy ho faty noho ny fahotantsika. Raha ny zaza naterak'i Maria dia tsy tena Andriamanitra, dia ralehilahy izay nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny maty dia tsy ho afaka na!
Moa ve isika mahita ny anaram-boninahitra Renin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly? Tsy misy, fa tsy no mahita “Andriamanitra telo izay iray” na “Baiboly,” fa izany zavatra izany, na. Raha ny anaram-boninahitra manokana mihitsy no tsy hita ao amin'ny Baiboly, anefa, dia ara-baiboly, izay midika fa mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Baiboly. Nanonona ny mpaminany Isaia, ohatra, Matthew manoratra, “'Indro, hanan'anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Emmanuel’ (izay midika hoe, Amintsika Andriamanitra)” (Matt. 1:23). Hitantsika ny maha Mary fiterahana, koa, Te hilaza in Elizabeth ny fiarahaban'i azy ao amin'ny Filazantsara: “Ary nahoana izany no omena ahy, fa ny renin'ny Tompoko tokony hanatona Ahy?” (Luke 1:43).
Azo antoka ny anaram-boninahitra Renin'Andriamanitra Andriamanitra dia miseho amin'ny antontan-taratasy ara-tantara mitondra ny datin 'ny Fiangonana tsara talohan'ny vanim-potoana ny Filan-kevitry ny Efesosy sy, Mahaliana ampy, ao amin'ny asa soratry ny Kristianina mpampianatra nidina avy ny Apôstôly Jaona, ny olona izay efa nankinina Maria i Jesosy tamin'ny fotoana nahafatesany (cf. John 19:27). Ignace d'Antioche, izay nianatra mivantana avy John, Nanoratra tao amin'ny momba ny taona 107, “Fa Andriamanitsika, Jesoa Kristy, dia nanan-anaka tamin'ny Mary” (Taratasy ho an'ny Efesianina 18:2). Irénée, izay mpampianatra ny Smyrna Polycarpe koa mpianatr'i ny Evangelist, Nanoratra toy izao tao amin'ny farany ny antsasaky ny taonjato faharoa, “Maria Virjiny, ... ny fankatoavana ny teniny, nandray avy amin'ny anjely ny filazantsara fa izy no mitondra” (Manohitra ny Fivadiham-pinoana 5:19:1). Irénée 'mpianatra, Hippolyte (D. 235), antsoina hoe Our Lady ho “ny tsy misy pentina sy Andriamanitra-jaza Mary” (Lahateny momba ny Faran'izao Tontolo Izao).
avy manodidina 250, manana ny vavaka Sub Tuum Praesidium, izay mitaraina, “Eo ambany ny famindram-po isika mialoka, Ry Renin'Andriamanitra.” Alexander, ny Eveka avy any Aleksandria, hoy in 324 fa ny tena ny ny Tompo dia “homarinana avy amin'ny Maria, renin'i 'Andriamanitra” (Encyclical Taratasy hafa Eveka Alexander sy ny Ejipsianina rehetra Non-Eveka 12). Around 350, Cyrille de Jérusalem nanambara, “Ny Virjiny Renin'Andriamanitra mijoro ho vavolombelona [ho an'i Kristy]” (ny katesezy Lectures 10:19). Ny Emperora romanina Julian ny mpivadi-pinoana (nanjaka. 361-363) nitaraina fa Kristianina “na oviana na oviana intsony hoe Mary 'Theotokos' [na Andriamanitra mpitondra]” (teny nindramin 'Cyril avy any Aleksandria, Fiarovana ny Kristianisma Hamely Ireo Boky ao Amin'ny ratsy fanahy Emperor Julian). Around 365, Athanase atao hoe Mary “ny Renin'Andriamanitra” (Fahatongavana ho nofo ny Tenin'Andriamanitra 8). Efraima ny Syriana (D. 373) Nanao izany ihany koa (cf, Hira fiderana 1:20). In 382, Grégoire avy any Nazianze hoe be raharaha-of-factly, “Raha misy tsy manaiky ny Masina Maria no Renin'Andriamanitra, dia mifanohitra amin'ny amin'Ny Andriamanitra” (Taratasy ho Cledonius ny mpisorona, Manohitra ny Apollinaris 101).
Farany ary Mampihomehy, Martin Luther dia (D. 1546), ny rain'i Protestanta, Maria masina niaro fiterahana. Tao amin'ny Fanazavana ny Magnificat, ohatra, izy nanoratra, “Men efa satroboninahitra rehetra ny voninahiny ho eo an fehezan-teny iray monja: ny Renin'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka milaza na inona na inona lehibe kokoa ny azy, na dia efa maro toy ny fiteny tsy fantatra dia misy ravina ny hazo.”